Posted on October 31, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 223 Views
के तपाईलाई उच्च रक्तचाप छ? यस्ता छन् उपचार विधि
Share0TweetGoogle+Pin00sharesके तपाईलाई उच्च रक्तचाप छ? त्यसो हो भने नआत्तिनुहोस् । यसका कारणहरु बारे सही जानकारी राख्न सके यसबाट बच्न सकिन्छ । आज हामी स्वास्थ जानकारी च्यानलमा उच्च रक्तचाप के हो? यसका कारण र बच्ने उपाएका बारेमा जानकारी दिन गैरहेका छौ । के हो उच्च रक्तचाप ?उच्च रक्तचाप अर्थात् ब्लडप्रेसर, मुटुबाट बाहिरिने र भित्र पस्ने रगतद्वारा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…